Deuteronomium 20 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔko ho mmara (1-20)
Wɔn a ɛnsɛ sɛ wɔkɔ ako (5-9)
20 “Sɛ wo ne w’atamfo rekɔko na wuhu sɛ wɔwɔ apɔnkɔ ne nteaseɛnam ne dɔm pii sen wo a, nsuro wɔn, efisɛ Yehowa wo Nyankopɔn a oyii wo fii Egypt asaase so no ka wo ho.+ 2 Sɛ morebɛkɔ ɔko a, ɔsɔfo no mmɛkasa nkyerɛ asraafo no.+ 3 Ɔnka sɛ, ‘O Israel muntie, ɛnnɛ morekɔ mo atamfo so ne wɔn akɔko. Mommma mo koma nntu, munnsuro wɔn, na mommmɔ hu, na mommma mo ho mmpopo, 4 efisɛ Yehowa mo Nyankopɔn ka mo ho, na ɔne mo atamfo bɛko ama mo na wagye mo.’+ 5 “Mpanyimfo no nso mmɛka nkyerɛ asraafo no sɛ, ‘Hena na wasi ofi foforo a ommuee ano? Ɔnsan nkɔ ne fi na wankowu wɔ akono amma obi foforo ammue ano. 6 Hena na wayɛ bobefuw* a onnya ntew so aba? Ɔnsan nkɔ ne fi na wankowu wɔ akono amma obi foforo amfa. 7 Hena na ɔde n’ano ato ɔbea bi so sɛ ɔbɛware no? Ɔnsan nkɔ ne fi+ na wankowu wɔ akono amma ɔbarima foforo anware no.’ 8 Mpanyimfo no nsan nka nkyerɛ asraafo no sɛ, ‘Hena na osuro na ne koma atu?+ Ɔnsan nkɔ ne fi na wantu ne nuanom koma sɛnea ne koma atu no.’*+ 9 Sɛ mpanyimfo no ne asraafo no kasa wie a, wɔmpaw asahene nsisi asraafo no so na wonni asraafo no anim. 10 “Sɛ wo ne kurow bi rekɔko a, bɔ dawuru nso na ɛhɔfo nhu nea wɔyɛ a ɛde asomdwoe bɛba.+ 11 Sɛ kurow no mufo de asomdwoe hyia wo na wobue wɔn apon ma wo a, ɛnde fa emu nnipa nyinaa yɛ nkoa na wɔnsom wo.+ 12 Nanso sɛ kurow no amfa asomdwoe anhyia wo na sɛ ɔpɛ sɛ ɔne wo ko a, ka kurow no hyem, 13 na Yehowa wo Nyankopɔn nso de kurow no bɛhyɛ wo nsa, na fa sekan kunkum emu mmarima nyinaa. 14 Nanso kurow no mu mmea, mmofra, nyɛmmoa, ne biribiara a ɛwɔ hɔ de, wubetumi afa ne nyinaa.+ Nneɛma a wubenya afi w’atamfo hɔ wɔ ɔko mu no bɛyɛ wo dea; Yehowa wo Nyankopɔn de ama wo.+ 15 “Saa na fa yɛ nkurow a ɛne wo ntam twe no nyinaa, nea ɛnka aman a ɛbɛn wo yi nkurow ho no. 16 Nanso aman a Yehowa wo Nyankopɔn de rema wo sɛ agyapade yi de, nnyaw biribiara a ɛhome wɔ nkurow no mu.+ 17 Mmom sɛnea Yehowa wo Nyankopɔn aka akyerɛ wo no, Hitifo, Amorifo, Kaananfo, Perisifo, Hiwifo, ne Yebusifo no,+ sɛe wɔn pasaa. 18 Sɛe wɔn, sɛnea ɛbɛyɛ a akyiwade biara a wɔyɛ ma wɔn anyame no, wɔrenkyerɛ mo mma monkɔyɛ bi, na moanyɛ bɔne antia Yehowa mo Nyankopɔn.+ 19 “Sɛ woka kurow bi hyem, na sɛ wo ne kurow no ko nna pii di so nkonim a, mfa abonnua nsɛe ɛhɔ nnua.+ Wubetumi adi ɛso aba no bi, nanso ntwitwa ngu. Adɛn, dua yɛ onipa na woaka no ahyem? 20 Nnua a wonni n’aba de, wubetumi atwitwa. Wubetumi atwitwa bi de asisi akoban* atwa kurow a ɛne wo reko no ho ahyia kosi sɛ ɛbɛhwe ase.
^ Anaa “wamma ne nuanom koma annan sɛnea ne koma anan no.”